နှစ်ချို့ကော်ဖီ: December 2011
ကျွမ်းသွားတဲ့ မီးသီးတစ်လုံးလို့ ၂၀၁၁ ဆိုတဲ့ ခရစ်နှစ်ပြက္ခဒိန်တွေလည်း မလင်းလက်နိုင်တော့… မနက်ဖြန် ပြောင်းသွားမယ့်နှစ်တစ်နှစ် မနေ့ကတော့ကျန်ခဲ့တဲ့နှစ်တစ်နှစ်…. ငယ်ငယ်ကဆို မျှော်လင့်ချက်တွေ အသစ်ဖြစ်မိတယ် နောက်လာမယ့်နှစ်မှာ ပိုကောင်းအောင်နေမယ် တကယ်တော့ အဲလိုတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ပေါ့ ဘယ်မှာ ပိုကောင်းလာလို့လည်း… ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကိုယ်မှ… နှစ်ကာလတွေ ခေတ်စနစ်တွေမကောင်းတာလို့ တရားခံရှာမိတယ်… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မျက်စိမှိတ်ပြီး ဒြပ်မဲ့ အရာတွေပေါ် အပြစ်တင်မိတာ ကိုယ့်အတ္တအတွက်တော့ ထွက်ပေါက်ပဲပေါ့ အခုတော့ နှစ်သစ်ကူးလေညှင်းမှာ ဘီယာချမ်းတွေ ဈေးကျနေတာကို ၀မ်းသာမိတယ် နောက်မနက်မှာ ရောက်မယ့် နောက်တစ်နှစ်အတွက် စိတ်ထဲမှာ ဘာမှမပြင်ဆင်ဖြစ်ဘူး…. လာမယ့်နှစ်လည်း အရင်းအတိုင်းပဲလား… လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကတော့ ဆိုနီကုမဏီလုပ်လို့ ၂၀၁၂ မှာ ကမ္ဘာပျက်မဲ့အကြောင်း စိတ်ဝင်စားမိသေးတယ် အခုတော့ ပျက်ပျက် မပျက်ပျက် အားလုံးလည်း စိတ်အေးလက်အေး… ဒီဇင်ဘာ နောက်ဆုံးညမှ မီးလင်းဖိုနဲ့ နွေးထွေးနေမယ့် လူတွေ ၀ိုင်အရက်တွေနဲ့ ပျော်မြူးနေမယ့် လူတွေ မီးတွေ လင်းထိန်အောင်ထွန်းပြီး ကားဟွန်းတွေ အကျယ်ကြီးတီးနေမယ့် လူတွေ တချို့ကပျော်ကြမှာပါ တချို့က အော်ကြမှာပါ.. ငယ်ငယ်က ဆို နှစ်တစ်နှစ်စတိုင်း ရွှေတိဂုံကိုတက်ဖူးဖြစ်တယ် အခုတော့ မရောက်ဖြစ်တာ နှစ်တွေလည်းကြာပြီ ဒီဇင်ဘာည တွေဟာ တခြားညတွေထက် နည်းနည်းတော့ ပိုအသက်ဝင်တယ်… ကောင်းချီးတေးသံတွေ ဆုတောင်းရေရွတ်သံတွေ ကျေးဇူးတော်ညစာစားပွဲတွေ ဖန်ခွက်သံဇွန်းသံ ရယ်သံချိုချိုတွေ ကမ္ဘာသစ်ကိုကြိုဆိုမယ့်လူတွေနဲ့ နောက်ထပ်လာမယ့် ၂၀၁၂ ကမ္ဘာကြီးက လူဦးရေ သန်း ၇၀၀၀ အဟာရပြည့်ဝတဲ့ အစားအသောက်မရနိုင်တဲ့ လူသန်းတစ်ထောင်… တစ်နှစ်ကူးလို့မှ မထူးတဲ့ဘ၀တွေနဲ့ ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ အပျော်အတွေ မုန်းတိုင်းထဲက ဖယောင်းတိုင်သာသာပေါ့…။ မိုးလှိုင်ည
ဆောင်းရာသီစောတဲ့ မြို့လေးမှာ နေသာရဲ့လား ဒီဇင်ဘာ…။
ဒီဇင်ဘာ… မင်းအိမ်ရှေ့လမ်းတွေမှာ နှင်းခဲတွေကြွေနေလား နှင်းပွင့်တွေဝေနေလား… ဒီဇင်ဘာ… လက်ဖ၀ါးတွေအချင်းချင်း နွေးနွေးထွေးထွေးနှုတ်ဆက်… ဒီဇင်ဘာ…. တောင်ကုန်းမြင့်မြင့် ထင်းရူးပင်လွင့်လွင့်… မွေးမြေက တောင်ခိုးတွေလွင့်လွင့်ဝေေ၀ ဒီဇင်ဘာ… ကမ္ဘာခြားတဲ့နှလုံးသားတွေကို ကမ္ဘာပြားတဲ့မေတ္တာတရားဖြစ်အောင်ရေးခြစ်တတ်သူ ဒီဇင်ဘာ မေတ္တာတရားရဲ့ အလျားအနံ့ကို လတ္တီတွစ်၊ လောင်ဂျီတွစ်.. မလွတ်စေတဲ့သူ… ဒီဇင်ဘာ… အသက်ရူလိုက်တိုင်း.. နှလုံးခုန်တိုင်း.. ကမ္ဘာကြီးတိမ်းစောင်းတိုင်း အနူမြူစီမံကိန်းတစ်ခုလို… စိုးရိမ်နေမိတယ်… ဆောင်းရာသီစောတဲ့မြို့မှာ နေသာပါ့ရဲ့လား … ဒီဇင်ဘာ…။ မိုးလှိုင်ညမနိုင်းနိုင်းစနေ မွေးနေ့ အမှတ်တရ..။
ရန်ကုန်မြိုကြီးမှာ ကြမ်းပိုးတစ်ကောင်လိုနေခဲ့မို့ ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးလို့ခေါ်လိုက်မယ် ရန်ကုန်မြို့ကြီးလို အဓွန့်ရှည်စေသောဝ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ ရေမရောတဲ့ ရန်ကုန်သားစစ်စစ်ဖြစ်တယ် အဘိုးက ရန်ကုန်ရေကျော်သား အဖေက ရန်ကုန်ကျောက်မြောင်းသား အမေက ရန်ကုန်ဘောက်ထော်ကျောက်ကုန်းသူ ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ သင်္ဃန်းကျွန်း၊ ရန်ကင်း၊ ဥက္ကလာပ၊ သာကေတ၊ ဒဂုံမြို့သစ်၊ ကြည်မြင့်တိုင်မှာနေဖူးတယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ ရန်ကုန်မြို့က ဘုရားစေတီတွေ အကုန်ရောက်ဖူးတယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ ရန်ကုန်မြို့ကို မြို့ပါတ်ရထားနဲ့ အကြိမ်ကြိမ်ပတ်ဖူးတယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အငှားယာဉ်တွေ၊ ဘတ်စ်ကားတွေ လိုင်းပေါင်းစုံအောင် စီးဖူးတယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ ရန်ကုန်မြို့ကဈေးတွေအကုန်ရောက်ဖူးတယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ ရန်ကုန်မြို့က ရုပ်ရှင်ရုံတွေ အကုန်ကြည့်ဖူးတယ်..။ ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ ရန်ကုန်မြို့က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေ၊ အရက်ဆိုင်တွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေ တော်တော်များများထိုင်ဖူးတယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ ရန်ကုန်မြို့က လူငယ်ရေးရာညကျောင်းတွေမှာ တက်ဖူးတယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲမှာ နေ့ရောညပါ လည်ပတ်ဖူးတယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ ရန်ကုန်မြို့က ကန်တော်ကြီး၊ အင်းလျားကန်တွေမှာ ရေကူးဖူးတယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ အောင်ဆန်းအားကစားကွင်း သုဝဏအားကစားကွင်းတွေမှာ အော်ဟစ်ဖူးတယ်… ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ ရန်ကုန် ဘူတာကြီးနဲ့ ကီလီဗောတံတားပေါ်မှာ အိပ်ဖူးတယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ ရန်ကုန်ဗိုလ်တစ်ထောင် ဆိပ်ကမ်းမှာ ငါးမျှားဖူးတယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ ရန်ကုန် ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ ဈေးရောင်းဖူးတယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ အစိုးရ၀န်ထမ်း ဘ၀နဲ့ ရန်ကုန်မြို့က ရုံးတွေ အတော်များများကို ၀င်ထွက်ဖူးတယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ စံပြငါးဈေး၊ သီရိမင်္ဂလာဈေးတွေမှာ ညလုံးပေါက်နေဖူးတယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ ရန်ကုန်မြစ်၊ လှိုင်မြစ်၊ ငမိုးရိပ်ချောင်း ၊ ပုဇွန်တောင်ချောင်းတွေကို အကြိမ်ကြိမ်ကျော်ဖြတ်ဖူးတယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ စာအုပ်အဟောင်းတန်း အ၀တ်အဟောင်းတန်းတွေကို ဖြတ်သန်းဖူးတယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ ရန်ကုန်အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေး၊ ဒဂုံ- ဧရာအဝေးပြေး ကားဂိတ်တွေကနေ နယ်မြို့တွေကို သွားဖူးတယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းကနေ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကိုသွားဖူးတယ်..။ ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကနေ ပြည်ပကိုသွားဖူးတယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ ရန်ကုန်မြို့နဲ့အတူ နိုးထဖူးတယ် တက်ကြွဖူးတယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ ရန်ကုန်မြို့ကြံတော့သုဿန်ကနေ ရေဝေး၊ ထိန်ပင်၊ ကျီစုအထိ သင်္ချိုင်းပေါင်းစုံရောက်ဖူးတယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ တာမွေအ၀ိုင်းကြီးက ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ဂိုဏ်းဝင်တွေနဲ့ ရန်ဖြစ်ဖူးတယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို မြေပေါ်မြေအောက်မကျန် မွှေနှောက်ဖူးတယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ ငယ်ငယ်တုန်းက သင်္ကြန်တွင်းမှာ ရေပူဖောင်းနဲ့ ကစားဖူးသလို သီတင်းကျွတ်မှာ ဗျောက်အိုးလည်း ဖောက်ဖူးတယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ သုံးကားပေါင်း မိုးအလင်း မော်ကွန်းရုပ်ရှင်ကို ကြည့်ဖူးသလို ကျိုက္ကဆံကွင်းမှာ ပြည်ထောင်စုအလံကိုလည်း ကြိုဖူးတယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုဟာ ကျောင်းသားဘ၀က ကျောင်းပြေးပြီး သမ္မတရုပ်ရှင်ရုံမှာ The Adventures ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုကြည့်ဖူးတယ် ရဲရင့်ရုပ်ရှင်ရုံမှာ နာမည်ကျော် အိန္ဒိယဇာတ်ကား အာရာဒါနား ကိုလည်းကြည့်ဖူးတယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ မြို့မကျောင်းလမ်းက လေဟာပြင်ဇာတ်ရုံမှာ Blues Grass ဂီတပညာရှင် Billy Steven ကိုလည်းကြည့်ဖူးတယ် အမေရိကန်တယောပညာရှင် Mark O’ Conner ကိုလည်းကြည့်ဖူးတယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ နတ်နွယ်၊ မောင်သိန်းဆိုင်၊ တက္ကသိုလ်မောင်အောင်ဆွေတို့ရဲ့ ၀တ္ထုစာအုပ်တွေ ဖတ်ပြီးကြီးပြင်းလာခဲ့တယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ “ခေါက်ထားသူငယ်ချင်း” …တို့ “ညတုန်းကတွေ့ခဲ့တဲ့ ကောင်းမလေးတစ်ယောက်” …တို့ “ရည်းစားအဖြစ်မှ စွန့်လွှတ်သည်” ….တို့ “ ဂီတာတစ်လက် အရက်ကတစ်စည်” …တို့ စတဲ့ အဲဒီသီချင်းတွေနဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့တယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ ဆံပင်ရှည်ကြီးဖားလျားနဲ့ ဘတ်စ်ကားတွေကို ခိုးစီးခဲ့ဖူးတယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ ချိန်းကြိုးတို့၊ နံချပ်ကူတို့၊ ကျွဲချိုပုံဂီတာတို့ ကိုင်ခဲ့တယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာ ဂေါ်လီတစ်လုံးလို လိမ့်ခဲ့တယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ ဆိုရှယ်လစ်တစ်ခေတ်လုံးကို ခေါင်းအုံးပြီးအိပ်ခဲ့တယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ ဂစ် လည်းသွေးတတ်တယ် ဇော လည်းဖုတ်တတ်တယ် ပေါ့ နဲ့လည်းဆွဲဖူးတယ် နဂါးပတ်လည်း ဆွဲဖူးတယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ ရန်ကုန် တန်ဆောင်တိုင်မှာ Play Boy, E.Machine, Aces, Super Star, LPJ, The Rays, New Wave စတဲ့ တီးဝိုင်းတွေရဲ့ စင်မြင့် ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကို ကြည့်ခဲ့ဖူးတယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ရော၊ ရုပ်ရှင်လက်မှတ်ပါ မှောင်ခိုရောင်းဖူးတယ် ကုန်တိုက်အောက်မှာ တန်းစီတိုးစားတဲ့ ဘ၀လည်းကြုံခဲ့ဖူးတယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြေးရုပ်ကို အလေးပြုဖူးသလို သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းနဲ့ ဦးသန့်တို့ရဲ့ ဂူဗိမာန်တွေကို ဂါဝရပြုဖူးတယ် ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ လွတ်လပ်ရေးကျောက်တိုင်ရှေ့မှာ ဓတ်ပုံရိုက်ခံဖူးသလို မြို့တော်ခန်းမရှေ့မှာ နိုင်ငံတော်သီချင်းလည်း ဆိုဖူးတယ် ခုတော့ ရန်ကုန်ကြမ်းပိုးဟာ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးပေါ်မှာ သွေးတိုးလို့ ငြိမ်နေရတယ်..။ လှသန်း ၂၂. ၁၀. ၂၀၁၁ နေ့တွင် ကွယ်လွန်သွားသော ကဗျာဆရာလှသန်း( ကြည်မောင်သန်း) အားဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် အမှတ်တရ ဖော်ပြသော ရနံ့သစ် မဂ္ဂဇင်းအမှတ် ၃၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၁ သုံးနှစ်ပြည့် အထူးထုတ် စာအုပ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်..။ (ဆရာလှသန်းနဲ့ အတူ ရနံ့သစ် အယ်ဒီတာအဖွဲ့ကိုပါ အထူးတလည်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်) မိုးလှိုင်ည Posted by